Nabad ku Naso Steve Jobs | Laga soo bilaabo Linux
Ku Naso Nabada Steve Jobs
Dad badan ayaa jecel, kuwa kalena neceb yihiin, dhaxal aan la dafiri karinna uga taga taariikhda Tiknoolajiyadda, wuxuu macasalaameynayaa adduunkan aniga (aniga ahaan) ahaa CEO aragti ka badan Barnaamij gaar ah awooday inuu yeesho
Steve Jobs Wuxuu ku dhintay da'da 56 sano, isagoo awoodi kari waayey inuu ka gudbo cudur ku habsaday muddo dheer. Nin ku dhex jira murannada, dacwadaha iyo arrimo kale oo la yaab leh, oo ka soo kiciyay shirkaddii uu aasaasay dambaska, ayaa kacdoon ka sameeyay iibsiga muusigga internetka, in kasta oo ay igu dhiirranayso inaan qirto, waxay u rogtay taariikhda aaladaha mobilada. Waxa kaliya ee aanan ka cafiyin ayaa ah inuusan sii deyn nooc ka mid ah iTunes waayo, Linux, laakiin haye ...
Nabad ku naso Waxaan rajeyneynaa in kuwa ku sii soconaya dhaxalkaaga, ay sii ahaadaan kuwa kula tartami kara. 🙁
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Ku Naso Nabada Steve Jobs
Isla faallooyinkaas ayaan ka sameeyay halka Malcer iyo Paraíso Linux:
Waxay umuuqataa inay tahay ficil aad ufiican adiga inaad wax qorto. Waxaan u maleynayaa in kansarka beeryarada uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee la isku fasiray, waxaan rajeynayaa in maalinta aan shaqeynayo ama layliyo layliyo aanan heli doonin noocyo badan oo kansar ah (Waxaan bartaa celceliska heerka CAE).
Sikastaba, waxay awalba dhigi lahaayeen baytariyada in kabadan intii ay udhigeen si ay ula dagaalamaan cuduradan, way iga careysiisay in dhimashada aan looga maarmi karin mustaqbalka fog.
In ka badan 56 sano, wuu ka weynaa laakiin ma dhiman doono
Hambalyo elav qoristiisa
Taasi waa taas. Dhammaan lacagaha ku lumiya dagaallada iyo waxyaalaha xun ayaa si aad ah loo jeexjeexay, halkii ay ku bixin lahaayeen baaritaannada noocan ah.
Hahaha waa wax lagu qoslo haddii ninkan lacagta badan haysta, uu aasaasi lahaa aasaas si uu daawo ugu helo kansarka, wax wanaagsan ayaa ka soo bixi lahaa tan (ka taxaddar kahor intaadan ogaanin inuu hayo), laakiin haye baastada intaa le'eg ayaad sii badanaysaa. Noloshu waa wax lagu qoslo RIP ninka iyo RIP khabiirka, u naxariisashada milyaneerka aan qaadan karin lacagtiisa qabriga.
Bog kale (mundogeek), waxaan kaga faalooday ra'yigayga ku saabsan warkan waxaanan ku koobay naftayda inaan ku wadaago meeshan:
“Runta ayaa ah waxaan garwaaqsanahay in shaqooyinku muujiyeen xirfado wax ku ool ah si loo jiheeyo hal-abuurnimada iyo mashaariicda suuqa. Shaki igagagama jiro in isaga laftiisu uu ahaa qof hal abuur badan oo caqli badan (dhinacyo badan).
Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale la socdaa in anshax ahaan iyo siyaasad ahaan, Shaqooyinku ay qayb ka ahaayeen ka faa'iideysi iyo danaysi fikir oo kaliya wax ku biiriya sinaan la'aanta bulshada, fikirka khaldan iyo dhiig-miirashada. Ma dareemi karo qaddarin qof sidan oo kale ah, laakiin waxaan ixtiraamayaa inay jiraan dad u baroordiiqaya geeridiisa.
Waa inaadan si xun uga hadlin nin dhintay, marka anigu kama hadli doono Steve Jobs.
In kasta oo uu muddo shaqo la’aan ahaa, haddana shaki la’aan waa khasaaro weyn. Wuxuu ka mid ahaa dadka kaliya ee xaqiiqdii u qalma aqoonsiga ay heleen. Nabadeey Steve Jobs.
Jawaab Kike Lafuente
Ubuntu 12.04 horeyba wuxuu u leeyahay magac: Precise Pangolin